Erayo jaceyl ah oo soo jiidasho leh a-z qeybtii 1-aad - Cishqi
Waxaad isweydiisay sida loo qoro erayo jaceyl ah gaar ahaan erayo jaceyl ah oo soo jiidasho leh a-z qeybtii 1-aad, hadaba baro maanta.
Erayo jaceyl ah oo oo soo jiidasho leh a.z
Markaad rabto inaad soo jiidato qalbiga lamaanahaaga waxaad u baahantahay erayo jaceyl ah gaar ahaan erayo jaceyl ah oo soo jiidasho leh a-z . Sida qalbiga lamaanahaaga loo soo jiito ma ahan sida cilmiga gantaalaha, Waa wax fudud. Cishqi ayaad ka baran kartaa. Hadaba adeegso erayo naxariis badan qaasatan erayadaan soo socdo.
Erayo raali galin ah
Erayo macaan xaaskaaga ku soo jiidan karto
1. Erayo jaceyl ah oo macaan
Jawigu waa mid aad qurux badan, jaceylkuna waa dareen aad u macaan laakin waa goortee? Iska fahan waa goorta aan aniga iyo adi jaceylka wadajir u daadihino.
2. Erayo raali galin ah
Kama daali doono inaan ku dhaho iga raali noqo qaali, maxaa yeelay waxaad ku weyn tahay qalbigeyga. Waan ogahay inaan wax u dhimay kalsoonidaada, dareenkaaga laakin waxaan weli ogahay in aan Adiga si dhab ah kuu jecelahay waana sababta igu kalifeyso inaan kuu soo diro eraydaan. Xaq ayaad u leedahay balse ha iloobin inaad tahay dareemaheyga iyo mustaqbalkeyga.
Sida ay wax u dhaceen hadaan isweydiiyo, aniguba ma aqaano waxaan ku jawaabo. Wax walbaa oo aan sameeyay eedeeda waxaa iska leh nafteyda, waana ka cudur daaranayaa xanuunka aan u geystay naftaada. Waxay igu tahay murugo joogto, walaac iyo walbahaar laakin mid ha iloobin, inaan diyaar u ahay raali galintaada Iyo wax walbaa oo aan ku heli karo farxadaada iyo kalsoonidaada.
Jaceylka dhabta ah ee aan adiga kuu qabo kuma ekaan doono halkaan ee wuxuu noqon doonaa mid sii jiri doonno. Inta ay nafi igu jirto uma hibeyn doono nafteyda ruux aan Adiga ahayn. I aamin, waxaan kuu balan qaadayaa sameynta wax walbaa oo qalbigaaga farxadgelin karo.
3. Erayo macaan xaaskaaga ku soo jiidan karto
Ku dheh erayo macaan xaaskaaga
Kaliya ma tihid xaaskeyga ee waxaa tahay rajada, iftiinka ifiya maalmaheyga, waxaa tahay nolosheyda, waxaana ii tahay wax walbaaa, waan ku jeclahay xaaskeyga qaaliga ah.
Aduunkaan waxaa ku tahay qof uun, laakin aniga waxaa ii tahay aduun dhan, waan ku jeclahay aduunkeyga.
Si kastaa oo ay u adagtahay maalintaydu, waxaa sixi karo dhoola cadeyntaada quruxda badan. Waan ku jeclahay xaaskeyga dheymanta ah.
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaad nolosheyda ku jirtid, kun sanadoodna waxaan rabaa inaan kuu shego, inaan ku jecelahay.
Haddaan telefoon ahaan lahaa, waxaad ii noqon lahayd Jaajar, waan dhimanan lahaa adiga la,aantaa. Waan ku jeclahay.
Waxaad istaahishaa aniga oo dhan, waxaad kasbatay subaxdeyda, habeenkeyga, duhurkeyga. Waxaad u qalantaa waqtigeyga maanta iyo kan mustaqbalkeyga maxaa yeelay waxaa tahay tan ugu fiican. Waan ku jeclahay.
Adigu ma tihid oo kaliya hooyada caruurtayda, laakin sidoo kale waxaa tahay garaacaa wadnahayga. Adigu ma tihid kaliya boqoradda qoyskaan, laakin sidoo kale waxaad tahay haweeneydii riyadeyda. Waan ku jeclahay.
Qish: Xaaskaaga uma baahno kaliya erayo macaan ee sidoo kale waxa ay u baahan tahay in la dareensiiyo. Hadaba halkaan ka baro sida aad ku dareensiin karto xaaskaaga jaceyl dhab ah.
4. Erayo jaceyl xikmad leh
Noloshu waxay ku bareysaa inaad u baahan tahay inaad go,aan qaadato waqtiga ku haboon. Ma ahan goor hore, mana ahan goor dambe.
Runtii waxaan ahay qof duceysan, maxaa yeelay adiga ayaan ku heystaa.
Maanta la joogo, waxaan ku dhaartay gebi ahaanba inaad adiga ilahaato.
Waan ku doortay. Waana ku dooran doonaa weligeey. Bilaa hakad, bilaa shaki. Waan sii wadi doonaa inaan adiga ku doorto.
Haddii aad noolaaneyso boqol sano, waxaan doonayaa inaan noolaado boqol sano oo hal maalin ka yar. Sida darteed uma baahni inaan noolaado adiga la,aantaa.
Xusuusnow qalbi in xiriirkeenu uusan ahayn game la ciyaaro, erayo la iska yiraahdo, mid bilaawdo maarso misana dhamaado may, ogow waa beri.
Halkaan hoose waxaan ku diyaarinay qormooyin kale oo xiiso leh kuwaasoo ay akhristayaasheenu ay u riyaaqeen. Guji si aad u akhrisato.
Qish gal qolkaan si aad u barato gabar guurdoon ah ama wiil riix halkaan: Somali girls and boys
Erayo jaceyl qeybtii labaad riix halkaan: Erayo jaceyl oo dareen leh
Qishka 1–aad: Geeraar jaceyl romantic ah
Qishka 2-aad: Oohinta galmada nuucaan ah waa macaan
Qishka 3-aad: Sawiro jaceyl oo romantic ah
Qishka 4-aad: Baro sida aad ku ogaan kartid gabadha ku jecel
Qishka 5-aad: Geeraar jacayla oo aad umacaan
Qiska 7-aad: Erayo Macaan oo xaaska ku soo jiidan karto
Qishka 7-aad: La soco qormooyinka xiisaha leh ee Cishqi Facebook
Qishka 8-aad: Erayo lagu kiciyo dareenka raga
La soco qeybta xigta. Haddii aad rabto inaad kamid noqoto akhristayaasha aan la wadaagi doono qeybaha kale, halkaan hoose iska diiwaangeli si aan kuugu soo dirno erayada cajiibka ah ee soo socdo.